माधव र प्रचण्डले कांग्रेससँग एकता गरी रुख चिह्न लिएर चुनाव लडे हुन्छ: प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीमा कमा र फुलिस्टप समेत परिवर्तन नभएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, “अघिल्लो दिनसम्म सडकमा उपद्रो मच्चाउने गठबन्धनका दलहरु रातारात कसरी युटर्न भए ? एमसीसीको विषय जस्ताको तस्तै छ । त्यसमा कमा र फुलिस्टप समेत परिवर्तन भएको छैन ।
केही नेताको लाज छोपिदिन बनाएको कागज मान्न के अमेरिका तयार हुन सक्छ ? नेपालको संसद्ले पास गरेको कुरा अमेरिकाले मान्छ भन्ने बेकारको कुरा हो ।”
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले भ्रम सिर्जना गरी समाजलाई विभाजित गरेको आरोप पनि ज्ञवालीले लगाए । उनले थपे, “उहाँहरुले अनेक भ्रम सिर्जना गर्नुभयो । तथाकथित राष्ट्रघाती र तथाकथित राष्ट्रवादीमा समाजलाई बाँड्नुभयो ।
एमसीसीको पक्षमा पोजिटिभ कुरा गर्नेलाई जुत्ता हान्छौं, ढुंगा हान्छौं, मोसो दल्छौं आदि भन्नुभयो ।सभामुख स्वयंले एमसीसी टेबल गर्नु परे आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्तो भावावेगको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।एउटा विकास प्रोजेक्टलाई लिएर चीन र अमेरिकाको हेडक्वार्टरले दिनहुँ बोल्नुपर्ने बनाइदिनुभयो ।
एमसीसी पास नगरे सभामुखको पद जाने भयो, माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदको पद जाने भयो भनेको होइन प्रचण्डले ? उहाँहरु मनको भयले आफ्नै छायासँग तर्सिनुभएको होइन ?”
एमसीसीमा नेकपा एमालेले मौनता नसाँधेको पनि नेता ज्ञवालीको कथन छ । उनले भने, “२०७४ भदौमा एमसीसीमा हस्ताक्षर हुँदा हामी सरकारमा थिएनौं । यो सम्झौता कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले गरेको हो ।
हामीले त्यो सरकार बदलिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राजनीतिक हतियारको विषय बनाउनुहुँदैन भनेर संसद्मा लगेकै हौं ।
तर त्यसमा प्रचण्डजीहरुले अवरोध सिर्जना भयो । हामले त चुच्चे नक्साको बेला जस्तै सबै पक्षलाई एकजुट गरेर टुंग्याउन चाहेका थियौं । यस पटक भदौदेखि सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले सुनेन ।
सदनको प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाएन । तर हामी मौन थिएनौं । एमालेले दोहोरो कुरा गरेको छैन । समाज एमालेका कारण विभाजित भएको होइन, राजनीतिक अवसरवादका कारण भएको हो ।”
एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुकेको आरोप पनि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले लगाए ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर एमसीसीलाई आम सहमतिका साथ सिंगो देशलाई एक बनाएर अनुमोदन गर्ने कुरामा चुक्नुभएको छ ।
उहाँले सबैको साथ लिन सक्नुपथ्र्यो । उहाँले पहल त गर्नुभयो, तर परिणाम आएन । उहाँले यसरी सत्तामा मात्र ध्यान नराखेको भए हुन्थ्यो ।”
एउटा प्रक्रियाबाट निकास आएपछि एमसीसीलाई थप विवादित बनाउनु नहुने पनि उनको धारणा छ । ज्ञवालीले थपे, “एमसीसीलाई अब राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्नुहुन्न ।
संसद्को एउटा प्रक्रियाबाट निकास आएपछि यसमा थप विवाद गर्नुहुन्न । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय हितमा अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली समाजलाई थप विवादित बनाउनेतर्फ लाग्नुहुन्न ।”
माधवकुमार नेपालले त एमालेलाई सिध्याउने चेतावनी दिनुभएको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा नेता ज्ञवालीले भने, “बिहानबिहानै हँसाउनुभयो ऋषिजी । माधव नेपालप्रति मेरो नो कमेन्ट । कुनै पनि कमेन्ट गर्नका लागि लायक कुरो पनि हुनुपर्छ ।
श्रोताहरुको मूल्यवान् समय किन खेर फाल्नुहुन्छ ?”उनले थपे, “माधव नेपाल भनेको ऐँजेरुजस्तै हो । जसको अस्तित्व अर्काको आङमा चढेर बाँचिरहेको हुन्छ, उसैले अरुलाई समाप्त गर्छु भन्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
पहिले गठबन्धनबाट अलग रहेर कुनै स्वतन्त्र निर्णय गरेर देखाउनुस् न । कसैले सिध्याएर एमाले सकिँदैन । आफ्नो धरातल, विचार र लक्ष्य बिस्र्यौं भने मात्र सकिने कुरा हुन्छ ।
अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डहरु केपी ओलीको भूतबाट तर्सिएको स्थिति छ । अब कांग्रेससँग एकता गरेर रुख चिह्न लिएर लडे पनि हामीलाई आपत्ति हुँदैन ।”
अर्को प्रसंगमा ज्ञवालीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय गरिमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा दिनु श्रेयस्कर हुने पनि बताए । ज्ञवालीले भने, “सभामुखलाई महाभियोग लगाउनेबारे हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं । यसबारे छलफलमै छौं ।
सभामुख भनेको सरकार र संसद्बीचको पुल हो, पर्खाल होइन । स्रेस्ता मिल्यो कि मिलेन हेर्न सक्नुहुन्छ । उहाँलाई कार्यकारी अधिकार छैन ।
सभामुख पार्टी विभाजनको भूमिका खेल्नुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँले पदको गरिमा कायम राख्न सक्नुभएन । अब उहाँले राजीनामा गर्नु राम्रो हुन्छ । अन्यथा थप कदम अगाडि बढ्छ । ज्ञवालीले सभामुखलाई हटाउने विषयमा नेपाली कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको पनि बताए ।”